Panthay (Myanmar Chinese Muslim) Masjid in Myitkyina | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သီပေါမင်းနှင့်မိဖုရားတို့၏ အရိုးအိုးပြန်လည်သယ်ယူရေး
အာဏာရူးတွေရဲ့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင် သွေးထိုးဖန်တီး အကွက်ဆင်ထောက်ချောက်လုပ်တာတွေ »
Panthay (Myanmar Chinese Muslim) Masjid in Myitkyina
“ဗလီ”ဟာ ပါရှန် ဖါရစီစကားဖြစ်ပြီး အရဗီလိုဆိုရင်တော့ “မ(တ်)စ်ဂျိဒ်” ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပါယ်က တော့ “အမိန့်နာခံတဲ့ နေရာ”ပါ။ ကိုးကွယ်ရာ အနှိုင်းမဲ့ အလ္လာဟ်ကို နာခံဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ နေရာပါ။
မမေးလည်းဖြေ(၈)- ဗလီဝတ် ကျောင်းတော်နှင့် ဝတ်တက်နှိုးဆော်သံ ဆိုတာ ဘာလဲ? from MMSY
ပင်မဝတ်ပြုဆောင်တွင် တရားဟောစင်မြင့်(မင်န်ဗရ်) တစ်ခုရှိပြီး ရှေ့ဆောင်ဆရာမှ ထိုစင်မြင့်ထက်မှနေ၍ သောကြာနေ့တိုင်းနှင့် ကျန်နေ့များတွင် အခါအားလျော်စွာ တရားဟောဆုံးမစကားပြောပါသည်။ ဝတ်ပြုဆောင် များမှာ အခန်းလွတ်များဖြစ်ကြပြီး ရှေ့ဆောင်နောက်မှ လိုက်၍ လူစုလူဝေးဖြင့်ဝတ်ပြုကြရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဝတ်ပြုမှုမှာ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ပါဒတော်များ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇယ်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ ဂုဏ်တော်တသခြင်းနှင့် မေတ္တာပို့သခြင်းများ ကို ရပ်ခြင်း၊ ဦးညွတ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်းနှင့် ဦးချခြင်းအနေအထားများဖြင့် ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်နေ့စဉ် ငါးကြိမ်စုဝေး ဝတ်ပြုခြင်းအပြင် ဝတ်ပြုဆောင်များတွင် တစ်ဦးချင်းအလိုက် သော်လည်းကောင်း၊ အုပ်စုလိုက်သော်လည်းကောင်း တရားဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျမ်းစာများဖတ်ရှုခြင်း၊ ဂုဏ်တော်တသခြင်း၊ တရားဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် ထိုင်ခြင်း (မုရာကဗာ)၊ ရမဒွန်ဥပုသ်လမြတ်တွင် တရားစခန်းဝင်ခြင်း(အိသိကားဖ်)တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဝတ်ပြုဆောင်ထဲတွင် ကုရ်အာန်ကျမ်းလာ ပါဒတော်များနှင့် တမန်တော်မြတ်၏ ဆုံးမစကားများကို ချိတ်ဆွဲထားလေ့ရှိသည်။ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်နှင့် ဆုံးမစာများကိုလည်း ဝတ်ပြုသူတို့ ဖတ်မှတ်နိုင်ရန် စာအုပ်ဗီရိုများဖြင့် စီစဉ်ထားပေးသည်။
အစ္စလာမ့်သင်ကြားမှုအရ ဟဂ်ျဘုရားဖူးရန်အတွက် သီးသန့်ဖြစ်သော ကာဘာကျောင်းတော်(မြင့်မြတ်မှုအရ သာလွန်သော်လည်း ကျန်ဝတ်ကျောင်းတော်များနည်းတူ အခန်းလွတ်ပင်ဖြစ်သည်)မှအပ ကျန်ဝတ်ကျောင်းတော်များ အားလုံးကို ဘာသာခြားညီနောင်များအနေဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်း(ဥပမာ- ဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် ဝတ်ပြုမှုကို သိလို လေ့လာလိုခြင်းမျိုး)ဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ဘာသာတရားတိုင်း လိုလိုတွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ထွဋ်မြတ်အဆောက်အဦးများနှင့်ပတ်သက်၍ ရိုသေမှု စည်းမျဉ်းများ ရှိကြပါသည်။ အစ္စလာမ်တွင်လည်း ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရိုသေမှုဆိုင်ရာ စည်းများ(ဥပမာ- အစ္စလာမ့်တရားတော်က သတ်မှတ်ထားသည့် ကိုယ်သန့်စင်မှုရှိခြင်း၊ ဟီရိသြတပ္ပနှင့်အညီ လုံခြုံစွာ ဝတ်ဆင်ထားခြင်း၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး မရောယှက်ခြင်းစသည်တို့)ရှိပါသည်။ ထိုစည်းများကို လိုက်နာနိုင်သော ဘာသာခြားမိတ်ဆွေများအနေဖြင့် မိမိညီနောင် မွတ်စ်လင်မ်နှင့်အတူ ဝတ်ကျောင်းတော်များသို့ လေ့လာဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်သခင် သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ် ခရစ်ယာန် သံအဖွဲ့လာရောက်စဉ် ဂုဏ်ပေးလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တမန်တော်မြတ် ဝတ်ကျောင်းတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပေသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဂန္ဒီကြီးမှာ အစ္စလာမ့်အလင်းပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီး မုဟမ္မဒ်သခင်ကို လေးစားလို့ပါဟုဆိုကာ သဖက်ပိုင်းလေးကို ပုခုံးတစ်ဖက် တင်ကာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များတွင် ရံဖန်ရံခါ လာရောက်ထိုင်နေတတ်သည်ကို သမိုင်းစိတ်ဝင်စားသူတိုင်း လေ့လာဖူးလိမ့်မည်။ ယနေ့သတင်းစာမျက်နှာများတွင်လည်း ဘာသာခြား နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ မွတ်စ်လင်မ်အများစုရှိရာ နိုင်ငံများသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးလာရောက်စဉ် ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်များသို့ သွားရောက်သည်ကို တွေ့နေရပေသည်။
Tags: Asia, Burma, China, Karachi, Muslim, Myanmar, Politics of Burma, Rohingya people
This entry was posted on August 4, 2012 at 11:04 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.